FIFIDIANANA BEN’NY TANANA : Kandidàn’ny IRD ao Ambilobe i Zella Carbonel
Anio sy rahampitso sisa dia hifarana tanteraka ny fahafahan’ireo kandida ho ben’ny tanàna mandrotsaka ny taratasy filatsahan-kofidiany eny anivon’ny Ovec. 11 septembre 2019
Efa manomboka fantatra avokoa araka izany ireo kandida natolotry ny volom-boasary na ny vovonana Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina amin’ireo Kaominina manerana ny nosy. Ho an’ny Kaominina ambonivohitr’i Ambilobe manokana dia ny kandida Raharilalanirina Sylvie Zella Carbonel no tapaky ny tompon’andraikitra ara-politika fa halatsaka ho kandida ben’ny tanàna ao anatin’ny Kaominina ambonivohitra Ambilobe. Somary nisy olana anefa teo amin’io filatsahan-kofidiany io.
Ny tenany, raha tsiahivina dia efa kandida tamin’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo ary nitana laharana faharoa tao aorian’ny Depiote Assimo Bruno izay voafidy soa aman-tsara. Ity farany izay sady filohan’ny rantsan’ny antoko Tanora Gasy Vonona (Tgv) ao anatin’ny Distrikan’Ambilobe. Araka ny fampitam-baovao voaray dia nalefa soa aman-tsara tamin’ny anaran’ny kandida Zella Carbonel ny taratasy manamarina fa izy no kandidan’ny Ird ao Ambilobe. Olom-boafidy iray tao an-toerana anefa no fantatra fa nivantanan’io taratasy io. Tsy fantatra na tsy azokazony na tsy mifanaraka loatra amin’ilay olona tiany ho tonga eo amin’ny toeran’ny ben’ny tanàna ity kandida natolotry ny Ird ity fa avy hatrany dia novainy ny anaran’ilay olona mety aminy ilay taratasy tokony halefa eny anivon’ny Ovec na “mandat”.
Rehefa tonga teny amin’ny Ovec amin’izay ilay kandida tena natolotry ny Ird dia nilaza ireo tompon’andraikitra tao fa efa misy olon-kafa natolotr’io vovonana antoko politika io. Rehefa nanao fanadihadiana kosa ireo tompon’andraikitra dia fantatra fa taratasy hosoka no nampiasain’ilay olom-boafidy. Nokosehin’ity olom-boafidy ity mihitsy ny “mandat” avy any Antananarivo. Tsy vitan’izay namporisika olona hikorontana teo anoloan’ny birao fiasan’ny “Ovec” ihany koa ity olom-boafidy ity. Tsy nitazam-potsiny anefa ny lehiben’ny distrika fa avy hatrany dia nandray andraikitra. Zavatra tsy fanao nataon’ity olom-boafidy ity ary nokianin’ny mpanara-baovao maro ao an-toerana. Izy izay natao ho modely sy hitondra ny feo sy hetahetam-bahoaka. Na izany na tsy izany tsara ny manamarika fa efa tafapetraka soa aman-tsara eny anivon’ny “Ovec’ ny antontan-taratasy firotsahan-kofidiana rehetra an-dRahalilalanirina Sylvie Zella Carbonel izay kandida natolotry ny Vovonana IRD ny alatsinainy teo na teo aza izay sakantsakana nataon’ny sasany izay ary ankasitrahan’ny vahoaka maro any an-toerana izy.